जाडोमा अनुहारकाे चमक कसरी कायम राखिरहने ?, अपनाउनुस् ४ उपाय « Kakharaa
जाडोमा अनुहारकाे चमक कसरी कायम राखिरहने ?, अपनाउनुस् ४ उपाय
१० मंसिर, एजेन्सी । जाडो शुरु भएसँगै अनुहार सुख्खा र फुस्रो हुनु सामान्य हो । यस्तो अवस्थामा अनुहारको बढी ख्याल राख्नुपर्ने डाक्टरहरुको सल्लाह छ । यस्ता छन् चिसोमा अनुहारको ख्याल राख्ने डाक्टर अशुम्ता सिंहको ४ उपाय ।
१. दुधको तर र मह
दुधको तर सबैभन्दा बढी मोस्टराइजर (अनुहारलाई सुख्खा हुन नदिने तत्व) हुन्छ । जसले अनुहारलाई कोमल बनाएर राख्छ । दुधको तर र महको बराबर अनुपात मिलाउनुपर्छ । महको प्रयोगले अनुहारमा व्याक्टेरियाबाट मुक्त राख्छ । यसरी मिसाएर बनाएको लेप अनुहारमा १५ मिनेटसम्म लगाएर मनतातो पानीले अनुहार सफा गर्नुपर्छ । नियमित यसको प्रयो गर्नाले शरीरमा चमक छाउँछ ।
२. सुन्तलाको बोक्रा र दुध
सुन्तलामा भिटामिन सी पाइन्छ, जसले शरीरलाई स्वस्थ्य राख्छ । सुन्तलाको बोक्रालाई सुकाएर पिस्नुपर्छ । एक अण्डाको सेतो भाग, एक ठूलो चम्चा नपकाएको दुध र सुन्तलाको बोक्राबाट बनेको धुलो मिसाउनुपर्छ । तयार मिश्रणलाई पूरै अनुहारमा लगाइ हातले माथि तल गर्नुपर्छ । यस्तो मास्कलाई हप्तामा एक पटक प्रयोग गर्नुपर्छ ।
३. केरा र दुध
चिसोको समयमा अनुहार सुख्खापना आउँछ । यस्तोमा अनुहारलाई सुख्खा हुन नदिन केरा र दुधको प्रयोग गर्नुपर्छ । केराले मृत कोषहरु अनुहारबाट हटाउन मद्दत गर्छ भने दुधले अनुहारलाई पोषिलो बनाउँछ । साथै यसले एकदमै क्लिजर पनि हो । यदि अनुहारमा तेल आउने किसिमको छ भने गुलाब जलको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । आधा केरा, एक चौथाई दुध र केही थोपा मह पनि मिलाउनुपर्छ । यसरी मिसाइएको मिश्रण अनुहारमा लगाएपछि केहीबेरमा पानीले धुनुपर्छ । अझ राम्रो परिणामा पाउनको लागि हप्तामा दुईपटक यसको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
४. मेवा र केरा
सुख्खा अनुहारको उपचारको लागि मेवा सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । केरा र मेवा बराबरा मात्राम मिलाएर अनुहारदेखि गर्धनसम्म लगाउनुपर्छ । यसरी लगाएको लेप १५ देखि २० मिनेटसम्म राखेपछि मनतातो पानीले धुनुपर्छ । यसलाई हप्तामा दुईपटक प्रयोग गर्नाले अनुहारमा चमक आउँछ ।
शरीरमा कसरी सही ढंगले रक्त प्रवाह हुन्छ ?
काठमाडौं ।शरीर स्वस्थ राख्नको लागि व्यक्तिको रगतको प्रवाह पनि सही मात्रामा हुनु पर्छ । जीवन
के गुलियो खानेकुराले मधुमेह हुन्छ ?
एजेन्सी । चिनीजन्य खानेकुरा सेवन नगर्दा मधुमेह लाग्दैन भन्ने जमात पनि कम छैन । जबकी
दाम्पत्य सुख : माया त यस्तो होस्
२० पुस, काठमाडौं । पति पत्नीमध्ये कसले कसलाई बढी माया गर्छ ? अक्सर दम्पतीबीच यस
औषधि सेवन गर्ने प्रभावकारी तरिका के हो ?
१९ पुस, काठमाडौं । हामी औषधि त सेवन गर्छौ, तर त्यसलाई कुन समयमा सेवन गर्ने
संसद् चल्दा कसैले उठाउन नसकोस् भनेर भुइँमा ठोकिए कुर्सी
काठमाडौं । विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक बुधबार सुरु हुँदै छ। यसपटक बैठकस्थलको
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका अनुसार प्रत्येक दिन औसतमा १० वर्षमुनिका एक जना बालिकाहरु बलात्कारको सिकार
निर्वाचन आयोगका सहसचिवको सरुवा कानुनविपरित
काठमाडौं । निर्वाचन अवधिमा निर्वाचन काममा खटिएका कर्मचारीको सरुवा गर्न वा काजमा खटाउन नपाउने कानुनी